မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၊ ဦးဘုန်း(ဓာတု)၊ ညီမင်းညို ☮ စာပေဟောပြောပွဲ ☮ ၀ါရှင်တန်မက်ထရို ဧရိယာ ကြေညာ | MoeMaKa Burmese News & Media
Than Win Hlaing - သန်းဝင်းလှိုင်၏ ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ဂါရ၀ပြု စာအုပ် မိုးမခက ဖြန့်ချိ
(မိုးမခ) ကိုမျိူး ဂရပ်ဖစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅
☮ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်၊ စနေနေ့၊ ☮ ညနေ ၄ နာရီ မှ ည ၈ နာရီ အထိ၊
☮ “သပြေညို မြန်မာစာကျောင်းခန်းမ” ☮
Twinbrook Elementary School, 5911 Ridgway Ave, Rockville, MD. 20851.
☮ စီစဉ်သူ ☮
Burmese Community Association, Metropolitan Area, Washington D.C.